Inona Momba Anao Manokana Moa Rehefa Siriana Ianao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Oktobra 2015 15:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Ελληνικά, Italiano, русский, polski, عربي
“Tian-dry zareo ho lavina ny zon'ny fianakaviana ho afaka mankahala ny fitondràna, izay namono olona, nampiditra am-ponja ary naka an-keriny ny zanak'izy ireo.” Ny endri-javatra ao Salaheddin, Aleppo, Syria. SARY : Freedom House (CC BY 2.0).
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ireo andian-dahatsoratra manokana nosoratan'ilay bilaogera sady mpikatroka mafàna fo, Marcell Shehwaro, namariparitany ny tena zava-nisy niainana tao Syria nandritry ny ady nitohy nifanaovan'ny tafika miara-dia amin'ny fitondràna tamin'ireo izay mikatsaka ny hanongana azy.
Isankerinandro dia mijery ny mpitsabo saina manara-maso ahy aho, tsy mahamenatra ahy ny milaza izany na eo aza ny fomba fisaina miparitaka be momba io fanao io ao anatin'ny fiarahamoninay. Saingy mitondra enta-mavesatra be ao anatiko ao aho, izay mikiky ny kely sisa mba fitiavana fiainana tavela tao am-poko.
Ny Alarobia mitatao vovonana no mba fotoana kely angalariko amin'ny asako hiresahana ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainana. Any amin'ny faran'ny fotoana, hoy ilay mpitsabo saina mantsy ahy : “Fa toa tsy miresaka zavatra manokana momba anao mihitsy ianao” Dia taitra tampoka aho, voasongon'ilay faniriako kidaladala hiseho foana ho manana ny marina, na tompon'ny teny farany amin'izay resaka atao (tahàka ny nolazain'ilay namako akaiky ahy hoe izany foana no ataoko), mba hampiseho amin'ilay mpitsabo fa hoe diso izy.
Tsy tafa aho!
Tsy dia tena haiko tsara hoe inona no mandrafitra ny “anao manokana” sy ny “an'ny daholobe” ao anatin'ny fiainana manaraka ny fenitra Siriana. Namana avy amin'ny fanohehana ireo namako—mifamatotra ny fiainanay vokatry ny fiainana tany am-ponja sy ny fandosirana ary ny fahatsiarovana ireo namanay lasa maritiora. Ny hany fianakaviako sisa mbola ifandraisako dia ny anabaviko, izay noterena hifindra toerana noho ny antony fandriampahalemana misy ifandraisany amiko. Ampahany amin'ny fandosiran'ireo Siriana mankany amin'izao tontolo izao ny fifindràny toerana.
Fitohizan'ny fandrindràna ny revolisiona ny asa ataoko.
Ary na ny fitàfiko aza dia mampiseho ny maha-vehivavy ahy any anatin'ireo fivoriana izay andehanako mifanohitra amin'ny zoko, amin'ny maha-vehivavy ahy, miseho ho matotra kokoa mifanaraka amin'ny fenitra ankapobeny apetraky ny fiarahamonina. Na angamba mifanohitra amin'izay: taratry ny fahalalahako manoloana ny fitsabatsabahana tsy azo leferina amin'ny fiainana manokan'ny vehivavy.
Ny vatako? Tsy haiko tsara na tiko na tsia izy io. Isan'ny zavatra iray ao anatin'izay inoako ny hoe miseho aminà habe maro samihafa ny hatsaràna, mifanohitra amin'izay fanasokajiana marindrano heverin'ny media ho hatsaràna.
Miaina anaty tanàna iray izay tsy vitako ifampiraharahàna akory aho. Izy no akaiky indrindra an'i Siria ary ny azo iasàna indrindra amin'ireo safidy azo raisina eo anoloana. Tsy hita ho lazaina ny fihetsehampoko ho azy io rehefa injay hiresaka “ny halehibeazan'ny fahatsaran'ny tolona.”
Izay rehetra vakiako dia momba ny revolisiôna avokoa na ny revolisionan'ny hafa, ary indraindray momba ny adin-dry zareo—ny hevitra ifikirako ankehitriny, ohatra, dia ny famakiana ny tantaran'ny ady an-trano Libaney. Izay rehetra soratako dia momba ny revolisiôna sy ny haromotany ao anatiko ao.
Fotoana vitsy lasa izay aho nandeha nivoaka nifanao fotoana taminà lehilahy iray. Natombony ny resaka, angamba mba hanamaivamaivana ahy, tamin'ny fanontaniana raha toa ka efa fantatro hoe hanomboka ato ho ato ny dinika Geneva III. Adinoko mihitsy hoe ahoana moa izany mihaona aman'olona sy miresaka zavatra araka ny tokony ho izy izany. Tsy fantatro akory aza izay hira nivoaka farany, afa-tsy ireo hiran'ny revolisiôna novokarina tato anatin'ny dimy taona.
Tsy misy “momba ny tena manokana” izany mihitsy.
Na dia ny famborahako, ao anatin'ny andàlana voalohany aza, momba ny fandehanako mijery dokotera mpitsabo saina, dia ho fandrisihana ireo olona tahàka ahy hiaiky ny rarin-tsainy. Mitondra zava-tsoa ny famborahana. Misy jiolahimboto mitam-piadiana ao anaty lohako ao ary baomba no mandoto ireo eritreritra mba tsara ao anatiko. Toerana fisavàna miisa an'arivony sy mpikendry miafina no mibahana ny fahatsiarovako tsy hiraraka.
Tany am-piandohan'ny revolisiôna, nahazatra ireo mpomba an'i Bashar Al Assad ny niampanga anay tamin'ny filazàna hoe “miainga avy aminà fihetsehampo manokana” ny fanoheranay ny fitondràna. Tian-dry zareo ho lavina ny zon'ny fianakaviana ho afaka mankahala ny fitondràna, izay namono olona, nampiditra am-ponja ary naka an-keriny ny zanak'izy ireo. Saingy ahoana no fomba hanavahana ny ampahany an'ny tena manokana sy ny an'ny daholobe ao anatin'ny habibianao manoloana ireo izay te-hamono anao fotsiny noho ny ezakao hametraka ny zonao manokana sy ny an'ny daholobe?
Taorian'ity fotoana fampiasàna atidoha ity, tsy afaka ny ho tezitra tamin'ilay mpitsabo ahy aho, ary niezaka tsy hifanojo fijery taminy. Marina tanteraka ny azy: tsy maintsy manatsahatra ny adihevitra ampilaminako aho ary mibaboka fa ireo eritreritro manokana no atahorako.
Nitsiky somary menamenatra aho, toy ny efa fanaoko, rehefa vitany ny nanodina ny fiezahako hamerivery azy. Tratrany daholo ireo ezaka nataoko mba hisehoako ho matanjaka ary namitaka ahy sy manome ny valiny tena izy ireo sangy ratsy nataoko:
Lasa tafahoatra any ambadiky ny fiheverana ny revolisiôna ve aho, raha tokony ho nisaina misimisy kokoa ny ady, toy ny ady feno aretina sy fahafatesana? Ny fiampangan-tena ato amiko no manakana ahy tsy ho afaka hikiaka hoe, voalohany indrindra ary tena izay mihitsy, asan'ny olona salama ny revolisiôna salama. Atahorako i Marcell, ny fitokantokànany, ny fomba fijeriny misaritaka ny atao hoe soatoavina, ny fifandraisany aminà Andriamanitra iray izay nahazatra azy ny nitodika taminy tamin'ny zavatra rehetra talohan'ny ady. Atahorako ny mihaona aminy ary lasa mihorohoro aho.
Mangataka ahy izy, ho an'ny fihaonanay manaraka, mba hitady toerana manokana ahafahako mifaly havanja. Tsapako—sady olona tia fanamby aho—fa io no mety ho iray amin'ireo asa sarotra indrindra tsy maintsy hatrehako amin'ity taona ity.
Momba ny tena manokana hoe? Tahàka ny inona ohatra?